I-Apple TV inokuba nenkxaso kumabonwakude ePrimiyamu, ngezivumelwano ezivela kubasasazi abakhulu | Ndisuka mac
I-Apple TV inokuba nenkxaso kumabonwakude ePrimiyamu, ngezivumelwano ezivela kubasasazi abakhulu
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iApple ivala isivumelwano sokubonelela abasebenzisi Apple TV Inkonzo yobhaliso kwiinkampani ezintathu zemveliso yobungakanani: I-HBO, ixesha lokubonisa, kunye ne-Starz. Olu lwazi silwazi ngo ingxelo epapashwe ngu Recode kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ukuza kuthi ga ngoku inkonzo iya kufumaneka e-US kuphela kodwa eli iya kuba liqonga lokunyusa inkonzo kumacandelo ahlukeneyo aba okanye abanye abasasazi bomxholo. Ngale ndlela, iApple yayiza kudlala kwibhodi engqongqo yeenkonzo zikamabonwakude ezihlawulelwayo.
Kwangelo xesha I-Apple iyakwazi ukwahlula kukhuphiswano, kuba ezi nkonzo zihlala zinikezelwa: nokuba ziinkonzo ezizimeleyo, okanye njengezincedisi kwigridi yeentambo okanye amajelo e-intanethi, njengoko kunjalo ngomnxeba ophambili kunye nabasebenza kumabonwakude. Ke ngoko, ukhetho olunikiweyo luya kuba kwimowudi umthwalo okanye usetyenziso oluninzi kwibhetshi enye. Sisicwangciso esisetyenziswe ngamanye amaxesha ngu-Apple, njengokukhutshwa kweevidiyo kunye nokusetyenziswa kokuhlelwa kweaudiyo, ngexabiso eliphantsi, kunokuba kuthengwe ngokwahlukeneyo.
Njengomzekelo, iApple ithengisa inkonzo HBO kwiqonga layo likamabonwakude ngexabiso le- $ 15 / ngenyanga, $ 11 / ngenyanga kwimeko ye Ixesha lomboniso kunye nokuqesha Starz Ixabiso li- $ 9 / ngenyanga. Ukuza kuthi ga ngoku asilazi ixabiso lezi nkonzo ukuba sizifumana kunye.
Izicwangciso zika-Apple zihamba ngokunikezela ngenkonzo nge-Apple TV kunye ne-iOS. Kwelinye icala, ukuba uyayiphinda imodeli yokwazisa esetyenzisiweyo Apple Music, sinokuba nexesha elinyiniweyo lokunyusa, elisinika ukulingwa kwenkonzo ngexabiso eliphantsi.
Nangona kunjalo, isivumelwano esinokubakho sisenokuba sikude. Ngokutsho kwemithombo yoshishino esemthethweni:
I-Apple ayinaso isivumelwano sokuqokelela kunye nayo nayiphi na inethiwekhi ephezulu. Abameli be-HBO ye-Time Warner ye-HBO kunye ne-CBS ye-Showtime benqabile ukuphawula. Abameli be-Starz kunye ne-Apple abangabanini be-Lionsgate abaphendulanga kwizicelo zokubeka izimvo.
Mhlawumbi ukunikezelwa kwesivumelwano kuya kwenzeka kunye nokunikezelwa kwe Isizukulwana sesi-5 se-Apple TV, ebikezela kwangaphambili Inkxaso ye4k.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple TV inokuba nenkxaso kumabonwakude ePrimiyamu, ngezivumelwano ezivela kubasasazi abakhulu
Susa iifayile eziphindiweyo ngeDuplicate File Finder, yasimahla okwexeshana